Ra'iisul Wasaaraha Spain oo maanta booqanaya Catalonia - Wargane News
Home World News in Somali Ra’iisul Wasaaraha Spain oo maanta booqanaya Catalonia
Ra’iisul Wasaaraha Spain oo maanta booqanaya Catalonia
Ra’iisul Wasaaraha Spain Mariano Rajoy, ayaa lagu wada in markii ugu horreysay uu tago gobolka Catalonia tan iyo markii laba todobaad ka hor uu halkaasi ka hirgeliyay xukunka tooska ah.
Booqashadiisa ayaa waxa ay imanaysaa iyadoo dhammaan dhinacyada ay isu diyaarinayaan doorashooyin goboleed bisha soo socota halkaasi ka dhici doona.
Ra’iisul Wasaaraha Spain, Mariano Rajoy, ayaa la wareegay maamulkii gobolka Catalonia waxa uuna ku baaqay in bisha Diseembar halkaas lagu qabto doorashooyin xilligooda laga soo hormariyay.
Haatan halkan ayuu imanayaa si uu uga bilaabo ololaha doorashada.
Mr Rajoy ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo kulan ay yeelanayaan taageerayaasha xisbiga, kuwaas oo doonaya in Catalonia ay ka sii mid ahaato Spain.
Inta uu booqashadan gaaban halkan ku joogo ayey suuragal tahay in Ra’iisul Wasaaruhu uu doorto inuu ka fogaado dadka isaga mucaaradsan ee baritaaraya dhaqdhaqaaqa madaxbannaanida ee Catalonia.
Waxyar ka hor ayey iskood si weyn isugu soo baxeen iyagoo ku baaqaya in la sii daayo tiro ka mid ah siyaasiyiinta Catalan kuwaas oo ku jira gacanta Spain laguna eedeeyay falal ay ka mid yihiin fallaagonimo iyo kicinta qalalaase.
Doorashooyinka waqtigooda laga soo hormariyay ee Catalan ka dhici doona bisha Diseembar ayaa fursad u ah in dhammaan dhinacyada ay ku muujiyaan awooddooda kaddib aftidii madaxbannaanida ee lagu murmay ee dhacday bishii la soo dhaafay.
Somaliland:Golaha Guurtida Oo Ka Dooday Arrimaha Dibada iyo Arrimaha Guddaha